AKHRISO:-Boqaradii Carbeed Oo Taageeray Soomaaliya Halka Mucaaradkuna Uurka Ka Hiqleeyahay | Saadaal Media
AKHRISO:-Boqaradii Carbeed Oo Taageeray Soomaaliya Halka Mucaaradkuna Uurka Ka Hiqleeyahay
Madaxweynaha dalka Soomaaliya, ayaa gaaray dalka sucuudiga 29.5.2019. Halkaas oo uu kaga qayb galaayay shir uu boqorka sucuudigu isugu yeeray dawladaha kumidaysan urur weynaha islaamka.
Madaxweyne Farmaajo oo ah madaxweyne la doortay 8.2.2017 ayaa noqday madaxweyne dadka soomaaliyeed u riyaaqeen soo bixidiisii oo ku soo baxay cod aan kal sooni hortiis heerkaa gaarta cidi ku guulaysan. Si dhab ah oo kal iyo laab ahna dadka soomaaliyeed dal iyo dibadba isugu raaceen uguna dabaaldageen guushaa ay heleen shacabka soomaaliyeed.
BOQORTOOYADA SUCUUDIGA OO UUGU YEERAY FARMAAJO IN UU YAHAY HOGAAMIYAHA ISLAAMKA QARADA AFRIKA
Waxaa xusid mudan in loo sameeyay madaxweynaha dalka soomaaliya mudane Muxamed cabdullahi farmaajo,soo dhaweeyn iyo xushmo iyo qadarin gaar ah. saxaafada dalka sucuudiga ayaa kusooqaatay falooyiin ay cinwaano uuga dhigeen AMIIRKA ISLAAMKA QARADA AFRIKA MUXAMED CABDULLAHI.
Run ahaantii Boqortooyada sucuudiga ayaa la tacajabay aadna ula yaabay oo filan waa ay ku noqotay, kadib doorkii dhex dhexaadnimo ee Farmaajo uu ka istaagay xirgif dhex martay labada dal ee islaamka ah ee walaalaha ah Sucuudiga iyo Qadar. Taas oo aysan ka filanayn waayadan in Soomaaliya door iyo mowqif qaadan karto isoo raacmooyee!!.
Dawlada Soomaaliyeed kuma koobnayn maw qifkaas dhaxaadnimo oo kaliya ee waxay ciyaartay doorkale oo ah heshiisiin labada dal. Waxaa intaa dheer in uu keenay taladii dhaxal galka ahayd ee ahayd in mid ka kooban laba marxaladood oo kala horeeya oo ah sidan hoos ku xusan ee aad arki doonto.
1.Marka u horaysa in labada dal dhex dhaxaadintooda ay galaan golaha carabeed.2.Haday golahaas soo dhaafto in ay galaan golaha islaamka.
Waxay boqortooyadu hubisay in uu yahay ninkani mid mabda leh oo dhabna ay ka tahay go aan ka uugaray iyo in uu yahay mid aduunyo doon ah! oo aan lahayn raganimo iyo sugnaansho, waxay u soo direen wafti uugu yimid Mogdisho oo u siday hadiyad gaaraysa 120.000 000 Boqol iyo labaatan milyan oo dollar,oo ah in uu ka baxo dhex dhaxaadnimada soona raco boqortooyada sucuudiga.Madaxweyne Farmaajo waxa uu gashaanka u daruuray damacaas isagoo u sheegay in uusan ahayn ninkay moodayaan!! markasaa sucuudigu iyo carab oo dhami ogaatay qiimaha iyo raganimada iyo sharafka Muxamed bin cabdullahi kadibna waa u qireen arinakaa kuna jeclaadeen. waana tii lagu soo qoray karaamadaas iyo isku kal soonaantaa Farmaajo dunida carbeed saxaafadooda iyo tan caalmakaba xiligaas.
waxay qireen dunida carabeed oo sucuudigu hormoodka u yahay in Muxamed yahay nin u soo baxay dalka soomaaliya, dunida carbeed tan islaamka iyo afrikada madoow intaba.waxay sheegeen nabada uu dhex dhigay geeska afrika kadib markuu heshiisiiyay Eratariya iyo Jabuuti iyo Ethiopia. libintaan iyo karaamadan waxaa helay umada soomaaliyeed oo ku faanaysa madaxweynahooda caadilka ah oo aduunkaba uu ku yar yahay maanta isagoo kale.
TV-yada caalamaka ayaa laga daawaday boqorka sucuudiga oo kolka Farmaajo u soo muuqdo qadarin iyo jacayl uu u qabo soo istaaga oo kusoo ordaaya kana horyimaada farmaajo,halka madaxda kale uu istaago oo kaliya. Farmaajo waa nin qab sare leh,rabigiina ku kalsoon iyo dadkiisa iyo dalkiisa soomaaliya. Waxaa xusid mudan in dad soomaaliyeed oo hankoodu hooseeyo oo ka fakara uun caloosha waxay galin lahaayeen,oo dan mooday dawlado shisheeye oo daba dhilif loo noqdo,in ay ku eedeeyeen dawlada soomaaliya mawqifkeeda dhex dhexaadnimo,iyagoo ka haybaysanaaya dawladaha khaliijka iyo reer galbeedka hanka iyo dadnimada umada soomaaliyeedna liidaaya.
Waxaana tusaale kuugu filan kuwa liidaya hanka soomaaliyeed iyo qabka oo dalka beecinaaya, xunkii xumaayo illaahay meesha dhaafshay xasan sheikh oo soomali wali kasoo kaban la dahay dhicii iyo boobkii uu ka dhigay gayiga soomaaliyeed iyo hagardaamadii dishay sucmada soomaaliyeed iyo qayimkii dadnimo ee soomaalidu lahaan jirtay iyo mudo afarsanadood ah oo uu ka dhumiyay soomaali dibna u celiyay. Ninkan oo kasmo yari darteed aad u jeedaan in uu maalin walba ilaa hada horfadhiyo irada weyn ee laga soo galo madaxtooyadii soomaaliya baafin xaraantuu ubartay darteed iyo dhicii ! waxaan maqli jiray “Dawaco meeshay malabsi uga baratay ayay macaluul uugu dhimataa” Waxaase is waydiin leh ninku xigtadiisa hoose(wacaysle) kama naxayaan miyaa may ka kaxeeyaan albaabka madaxtooyada ee uu yuururo habeen iyo maalin! Ninku ma ari carbeedkii Mogdishaa miyaan dan laga lahayn isaga waaba aragnaaye ?Noocyadani waa kuwo diidan in soomaaliya hesho dawladnimo nidaam iyo kala danbayn oo ubadka soomaaliyeed helaan fursad dawladnimo si ay ugu noolaadan dunida korkeeda sharaf iyo dawladnimo sida dhigooda caalamka iyo dalalka dariska ah sida kenya iyo ethiopia oo ah dawlado jira.Cadawga dawlad diidka ah ee shisheeyaha u adeegayaa waxay dhaaf sadeen waxwalba xoogaa shilimaan oo loo tuuray kaliya. wixii uu xasan sheikh iyo xulufadiisii hanti dhaceen malaayiin doolar ahayd aaway maanta? wakaa tuugsanaaya MOGDISHO dhexdeeda!! aduunkana sharaf xumo aakhirana cadaab maxaayeelay xoolaha iyo hantida dadweynaha lagaacafin maayo illaa iyagu ku cafiyaan. xaaran todobo fac ayay ku firsataa oo ubadkaaga halaagtaa wax laga cararo weeye ninkii wax kasayaa.
Farmaajo oo isaguba ogaa arkaayay in culays siyaasadeed ku imanaayo markuu qaatay mawqifkaas,ayaa leh xamilkeedii iyo masuuliyadeedii iyo adkaysigeedii taasoo guul ugu dhamaatay. waxaa xusid mudan iyo taariikh in labadii dawladood ee Sucuudiga iyo Qadar heshiiyeen oo boqoradii labada dal iyo Farmaajo meel kuwada afureen iyagoo qoslaya oo gacmaha is haysta!! Boqorka Sucuudiga oo ah nin weyn oo waayo badan soo joogay ayaa yiri ” Farmaajo waa Amiin run loow ah” kuwaan siyaasada aqoon ee beeso u qaatay ha meersadaan hana yeedh sadaan casharada uu dhigaayo Madaxweynahooda aragtida fog ee dheer lihi. Waxba kama faaiideen aduunka iyo aakhiraba haduu farmaajo aduun qaadan lahaa oo sucuudiga raaci lahaa ama qadar raaci lahaa. Laakiin maanta labadaba wuu faa iiday maxaayeelay xaqa ninkii ku sugnaada ee aan eexan dhinac,ajarbuu leeyahay,aduunkana dadku wuu ku arkaa in aad qof damiirle tahay oo mawqof leh meela istaagi kara wuuna kugu qiimayn taa marwalba. Mid dadka soomaaliyed iyo dalka soomaaliyeed iyo diinteenaba dhaaf san jiray xoogaa doolar ah ayaa yiri waa khaldan yahay Farmaajo muu raaco suucuudiga!!
Dawladaha carbeed iyo dunida islaamka oo boqorka sucuudigu u horeeyo ayaa ugu yeeray Madaxweynaha soomaaliya Hogaamiyaha islamka ee qarada afrika waana waxay ka arkeen.
Waxayna boqoradu dawlada soomaaliyeed u diyaariyeen hiil iyo hoo dib loogu dhisaayo dalkeena soomaaliya oo meel fican maraaya hanaanka iyo hanashada dawladnimo.
Madaxweyne farmaajo wuxuu midaynayaa,umada soomaaliyeed ee sida ba an shisheeye u kala qabiyay oo ka dhigayaa haldawlad oo awood leh siday ahaan jirtay. waxa uu kusoo dabaalaya dalkeena soomaaliya sinaan,cadalad, midnimo iyo dawladnimo buuxda. dadka soomaaliyeedna waa isku diin,isku af,isku calan,isku dad,isku diin,isku diir,isku isrir,lamana kala qaadi karo kii isku dayana gacan bir ah ayaa lagu qabanayaa. dunidoo dhan baa qirtay hogaaminta fiican ee madaxweyne farmaajo maxaa ii diidaya anigoo ah soomaali in aan ku faano ku farxo u qiro waxaa illaahay siiyay ee sharaf ah? waxaa hubaal ah in dawlada soomaaliyeed iyo dadka soomaaliyeed mar dhaw noqonayaan kuwa aduunka ugu sharafta badan looguna ixtiraamka badan yahay duniduna u soo shaqo tagi doonto. dadka soomaaliyeed haka hortagaan cadawga gudaha ee doonaaya in uu ku sii hayo soomaali dulinimo iyo dawlad la aan iyo qabiilooyin calamo yar yar haysta oo ka caagan dawladnimo iyo calankii xidigta lahaa ee buluuga ahaa.
Waxaad arkaysaa kuwo diidan dawladnimada soomaaliya in ay guulaysato iyo in dalkeenu yeesho dawlad dalkoo dhan hanata siday shalay ahaan jirtay. oo ahayd in dalkeena dawlad ku soo xad gudbi kartaa jirin iyo cid badeena sheegata midna, waayo dawlad baynu lahayn inaga celiso cadawga dalkeena damaaciya. Hadaba dawladii dalkeena soomaaliya difaaci lahayd ee cadawga inaga celin lahayd ileen dawlad baa dawlad kaa celisee ayaan lugaha qabanayaa oo diidayaa,oo dawlad kastoo dawladeena ay isqabtaan ayaan raacaya sida Emaraatka,iyo kuwo kalaba,hadana afkaaan furanayaa oo waxaan ku qaylinayaa kenyaa nagu soo duushay iyo ethiopiaa na qaadanaysa waa laba arin oo aad u kala fog oo aan is qabanayn.caruurtaa garanaysa wax la qaadan karana ma aha. sidaa daraadeed cadawgaas waa in dalka laga qabtaa oo aan meel uuga soo wada jeed sanaa lacag ku soo qaatay duminta dawlada soomaaliyeed dhab ahaana iyagaa ka sii xun dawladaha cadawga inagu ah.